अर्थ / वाणिज्य – Articles Nepal
काठमाडौं । हजारको नोट अर्थात सजिलो भाषामा ‘हात्ती’। तर, यसको त्यही हात्तीमाथि प्र’श्न उठेकाे छ, के यो नेपाली नै हो त? भनेर । तर प्र’माण दिने कोही निस्किएको छैन। बरु होइन भन्ने आधार देखाउने धेरै छन। वि’वाद बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुरक्षित
ह्वात्तै घट्याे सुनको मूल्य
Articles Nepal September 9, 2019 0
आज अर्थात आइतबार सुनको मूल्या ह्वात्तै घटेकाे छ । आइतबार सुन तोलाको ५ सय र चाँदी प्रतितोला १५ रुपैयाले घटेको हाे । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला, तेजाबी सुन र चाँदीको मूल्यमा उच्च गि’रावट आएको हाे । स्थानीय बजारमा आइतबार
सात वर्षको बालकले कति पैसा कमाउँला ? अधिकांश यस उमेरका बालकले कमाउने होइन, खर्च गराउँछन् । तर अमेरिकाका एक बालकको कमाई वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । अमेरिकाका रेयान नामका यी बालक हरेक हप्ता युट्युबमा केटाकेटीले खेलाउने खेलौनाको समीक्षा गर्दछन्
नेपाली कामदार लैजाने बिषयमा नेपाल र जापानबीच सरकारी संयन्त्रबाट नै गत जनवारीमा सहमति भएको छ । तर जापानले के कति संख्यामा कामदार लैजाने बिषयमा निक्र्यौल हुन नसक्दा रोजगारीका लागि जापान जाने इच्छा भएका नेपालीहरु अन्यौलमा परेका छन् । जापानका बिदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत चुहावटबाट करिब ७ अर्ब जोगाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो पाँच महिनामा विद्युत् चुहावट १५.४५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रणालीमा औसत २०.४५
बधाई ! शृंखला वाणिज्य बैंकको ब्राण्ड एम्बास्डर नियुक्त
Articles Nepal January 2, 2019 0
काठमाडौं– राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मिस नेपाल शृंखला खतिवडालाई ब्राण्ड एम्बास्डर नियुक्त गरेको छ। बैंकका नायव महाप्रवन्धक एवं सूचना अधिकारी टेकराज जोशीका अनुसार मिस नेपाल २०१८ शृंखलालाई ब्राण्ड एम्बास्डर नियुक्तीको औपचारिक घोषणा बुधवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरिनेछ। बैंकले बुधवार दिउँसाे २:३० बजे पत्रकार सम्मेलन
भृकुटीमण्डपका चियापसलको कारोबार २० लाख बढि
Articles Nepal July 16, 2018 0
काठमाडौँ- भृकुटीमण्डप, काठमाडौँका विभिन्‍न कार्यक्रम र प्रदर्शनी हुने ठाउँ। त्यसबाहेक निम्न र मध्यम वर्गीय धेरैको भेटघाटस्थल। काठमाडौँका सार्वजनिकस्थलहरु मध्ये हप्तैभर भृकुटीमण्डममा चहलपहल बढी हुन्छ। समाज कल्याण परिषद्को स्वामित्वमा रहेको भृकुटीमण्डपमा व्यवसाय गर्दै जीविकोपार्जन गर्ने कयौं छन्। सस्तो सामान पाइन्छ भनेर भृकुटीमण्डप पुग्नेको
Articles Nepal January 16, 2018 0
जिल्लाका कृषकहरूले केरा खेतीबाटै वर्षमा १ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । थोरै लगानी र कम श्रममै राम्रो आम्दानी हुने भएपछि रुकुमका कृषक केरा खेतीमा आकर्षित हुन थालेका हुन् । कृषकले केरा खेतीलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका कारण
अछाममा हावाले पुरा गरेको बिजुलीको सपना
Articles Nepal December 1, 2017 0
१५ मंसिर । गत वर्ष हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुराले देशैभरी चर्चा पायो । त्यहि समयमा अछामको सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र कमलबजारमा हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि काम भईरहेको थियो । निरन्तर हावा चलिरहने कमलबजारमा अहिले हावाबाटै ३१ किलोवाट बिजुली बलिरहेको छ । हावाबाट बलेको